Xaflada xiritaanka Iskuulada & kaniisadaha | Somaliska
Xaflada xiritaanka Iskuulada & kaniisadaha
Xafladaha xiritaanka iskuulada ayaa lagu soo roggay shuruud cusub oo ka mamnuucaysa in ay arimaha diimaha soo galiyaan haddii xaflada lagu qabanayo kaniisadaha. Madaxa haya’da qaabilsan arimaha iskuulada Anna Ekström ayaa wargeyska DN ku qortay in iskuulada loo ogolyahay in xaflada ay ku qabtaan kaniisadaha balse ay mamnuuc ka tahay in ay goobta ka sheegaan wax ku saabsan diinta ama ilaahay ama Ciise.
Sababta ayay ku sheegtay in iskuulada Sweden ay ka madax banaan yihiin arimaha diimaha. In aan la doonayn in caruurta lagu dhiiri galiyo diin gaar ah. Xiligii hore ayay caado ahayd in kaniisadaha lagu qabto xiritaanka iskuulka iyadoo markaas caruurta loo akhrin jiray warbixino ku saabsan diinta Kiristaanka.
Sharcigaan cusub ayaa jahwareer ku abuuray baadariyaasha kaniisadaha Sweden maadaama laga mamnuucay in ay ka hadlaan wax diinta ku saabsan iyadoo kaniisadooda lagu qabanayo xaflada xiritaanka.
Arintaan ayaa ah mid u wanaagsan ardada iyo waalidiinta Muslimiinta ah oo markii hore dhibaato ku qabay xafladaha lagu qabanayo kaniisada.
Filim ku saabsan Soomaalida oo ka ilmaysiiyay raysal wasaaraha Sweden [Video]
ok waaye sidaan ayaa ufiican muslimiinta ok tankale maxaa kacusub jimcaalow shrciyada ku saabsan somalida ÄÄ
Thanks Jimcale, waa ku mahadsantahay macluumadka iyo wararka joogtada ah ee aad la socodsiiso bulshadaada somaliyeed. wanad ku mahadsantahay in aad waqtigaaga iyo firadaadaba ugu deeqaday bulshadaada.
Intaa kadib waa arin fiican in loo sinaado iskulada oo laga saaro kaniisada
wali waxaan fahmin waxa iska galay iskoolka iyo kaniisada,
Anna waxaan leebahay tack,
aniga waanku faraxnahay ugu horayn go’aankaan jimcale adiga walal mahadsanid, laakiinse waxaa meesha ka cad dowlada sweden in ay cadaysatay in ay tahay wadan bilaa diin ah oo aan diina ku haysan meesha manta kaniisadii afka la qabtay masjidkana waa in uu taxadar ku jiraa ileen ayagana xarun diimeede
November 28, 2012 at 00:23
Thx jimale….. Hadiiba kaniisada la galaayo maxaaba meesha yaalo teeda kale swidishka awalba diin ma aaysan haaysanin waayo diin aan diinta islaamka aheyni maba jirin…… Somalida sweden waxaan kula talin lahaa ineey u doodaan ineey sameysan karaan madaaris lagu barto culuumta maadiga ah iyo tan islamiga ah s caruurtooda aan looga marin habaabinin